Motorola သင့်ရဲ့ android အတွက်အကောင်းဆုံးအနာဂတ်အဖော် skip | Androidsis
Joaquín Garcia က | | NOTICIAS, အခြားကိရိယာများ, လုံခွုံရေး
လက်ရှိတွင် Android နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်မှုရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်စမတ်ဖုန်းအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစွာရှိပါသည် ပုံမှန် e-ink မျက်နှာပြင်အင်္ကျီလက်နာမည်ကြီးစမတ်နာရီများမှတဆင့်လူကြိုက်များသည် Chromecast ကို ၎င်းသည်စမတ်ဖုန်းကိုယ်နှိုက်ကိုနောက်ထပ်အသုံးအဆောင်တစ်ခုအဖြစ်အသွင်ပြောင်းရန်အထိဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်က Motorola သည်စမတ်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Motorola Skip ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းကိုအပြည့်အ ၀ ဆေးကြောနိုင်ခြင်းမရှိတာကစမတ်ဖုန်း၊ သော့လိုအရာဝတ္ထုတွေကိုနေရာချထားဖို့ဒါမှမဟုတ်စမတ်ဖုန်းကိုမထိဘဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားဖို့ခွင့်ပြုပေးတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
Motorola Skip မှာအဲဒီအချိန်ကခွင့်ပြုထားတဲ့ NFC ချစ်ပ်တစ်ခုရှိပြီးသော့တွေနဲ့ရှုပ်ထွေးသူတွေအတွက်ဒါမှမဟုတ်စမတ်ဖုန်းနဲ့အတူရှုပ်ထွေးနေတဲ့သူအတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးအဆောင်ပဲ။ FCC ၏အစီရင်ခံစာများနှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များအရကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်းတစ်နှစ်အကြာတွင် Motorola မှယောက်ျားများသည်၎င်းသည်အရောင်းရဆုံးရောင်းသူဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထင်မြင်နေပြီး၎င်းကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းချမှုများမကြာမီပြုလုပ်နိုင်ရန်အနည်းငယ်ပြုပြင်ထားကြသည်။ အခုတော့ Motorola Skip တွင် Bluetooth ချစ်ပ်တစ်ခုပါရှိသည် ကတူညီတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုစောင့်ရှောက်ပေမယ့်။
Google နဲ့ Motorola တို့ Motorola Skip အတွက်အစီအစဉ်ရှိလား။
Motorola Skip ဖြင့်သင်ဖုန်းပျောက်သွားသည့်အခါဖုန်းမြည်။ ဖုန်းကိုရှာနိုင်သည်။ Motorola Skip ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်းမှတစ်ဆင့်ရှာဖွေနိုင်သည်။ အကယ်၍ Motorola Skip သည်ပိုက်ဆံအိတ်သို့မဟုတ်သော့ချိတ်ကဲ့သို့သောအခြားအရာတစ်ခုနှင့်ဆက်စပ်ပါကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပြီးတော့စမတ်ဖုန်းနဲ့နီးနေရင်တောင်သော့ဖွင့်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သော့ခတ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ဒါကဒီမေးခွန်းအတွက်ကိရိယာပါ။ အကယ်၍ သင်မှန်ကန်စွာမှတ်မိလျှင်နောက်ဆုံး Google I / O တွင် smartwatches အရည်အသွေးနှင့် Android L အသစ်ကိုယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့မသိရှိရသေးပါ။ အနီးအနားရှိအချို့သောစမတ်အရာဝတ္ထုရှိခြင်းကိုသော့ဖွင့်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေ.
ဤနည်းပညာကို Motorola မှကူးယူထားခြင်းဖြစ်သော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ရောင်းချပါက Motorola Skip သည် Android တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္haveတွင်ရှိနိုင်သော်လည်း Google နှင့် Motorola နှစ်ခုစလုံးက၎င်းတို့ကိုရောင်းချရန်နှောင့်နှေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ Google နှင့် Motorola, ဒါပေမယ့် ဘာလဲ ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိနေစဉ်ကျွန်ုပ်သည် Motorola Skip နှင့်၎င်းအတွက်တစ်ထောင်နှင့်တစ်မျိုးတည်းအတွက်အသုံးပြုရမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် ( ဒါမထင်မှတ်ပါပဲ).
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » အခြားကိရိယာများ » Motorola သင့်ရဲ့ android အတွက်အနာဂတ်စံပြအဖော်ကိုကျော်လိုက်ပါ
IOS အတွက်လျှောက်လွှာမရှိပါ ဥရောပ Startup မှစီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုမှာ Gablys ဟုခေါ်သော Motorola ကဲ့သို့သောအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအဆိုပြုထားသော်လည်း Accelerometer ကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည် Android နှင့် IOS အတွက် application များ၏ဒီဇိုင်းကိုပိုမိုစဉ်းစားစရာရှိသည်။ မင်းအဲဒါကိုတွေ့နိုင်တယ် http://www.gablys.com
Google Play တွင်အများဆုံး download လုပ်ထားသော Application Q ကိုယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သိရှိသည်
ဘေးထွက်လမ်းညွှန် panel ကိုနှင့်အတူအထူးပစ်လွှတ် 3